नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, १२ असोज २०७६)
बजार सारांश (असोज ९, २०७६)
गत साता नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ५ अंक (२.२१ प्रतिशत) घटेर ११२९ दशमलव ८० मा बन्द भएको छ । गएको साता ५० दिनको मुभिङ एभरेजले २०० दिनको मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट तल काटेको (डेढ क्रसओभर) छ, जसले बजार अझै तल झर्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. ३७ दशमलव ८५ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम घटेर रू. १९ दशमलव ६० करोड पुगेको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ११०२ दशमलव ६४ देखि १३४९ दशमलव ३८ को स्विङको ७८ दशमलव ६ प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट जोनको सपोर्टभन्दा तल पुगेको छ ।
2019-09-29 - 147 view(s) - abhiyandaily